Xafladda caleema saarka Farmaajo oo maanta Muqdisho kadhacaysa. – Radio Daljir
Xafladda caleema saarka Farmaajo oo maanta Muqdisho kadhacaysa.
Febraayo 21, 2017 9:49 g 0
Muqdisho, Feb 22 2017-Magaalada Muqdisho gaar ahaan xarunta Ciidanka Cirka Afasiyooni ee Magaalada Muqdisho maanta waxaa ka dhaceysa Munaasabad lagu caleemo saarayo Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed (Farmaajo).
Munaasabada Caleemo Saarka ayaa waxaa ka qeyb geli doona Madax ka socota Dalalka Afrika, gaar ahaan kuwa deriska la’ah Soomaaliya, Xubnaha Beesha Caalamka, Madaxweynayaasha Maamul Goboleedyada qaar, Madaxweynaha Maamulka Gobolada Dhexe ee Dalka Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan iyo marti sharaf kale.
Dhanka kalena Munaasbadan ayaa waxaa ka qeyb geli doona Madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud, sida uu qorshuhu yahay.
DHEGEYSO-Wasiirka howlaha guud iyo gaadiidka Puntland oo ka warbixiyey waxqabadka wasaaradda.
DHEGEYSO-Wasiirka waxbarashada Puntland oo ka warbixiyey safar uu ku tegey Taleex.